Mpanamboatra andalana famokarana tsy miteniteny | Sina Meltblown tsipika famokarana tsy vita tenona Pabrika sy mpamatsy
Ny vokatra andian-tsarimihetsika orinasa dia be mpampiasa amin'ny indostria, fambolena, fiarovam-pirenena, indostrian'ny simika, fizahan-tany ara-panatanjahantena, fahadiovana, haingon-trano, fonosana, fiainana ary sehatra hafa.
Akanjo fandidiana SMS miendrika SMS tsara indrindra lamba tsy vita amin'ny lamba mac ...
SMS PP Nalefaka-notsofina Nonwoven lamba famokarana, N ...
Masinina vita amin'ny SMS fandidiana SMS vidiny tsara indrindra ...
Spunmelt mitambatra andalana famokarana tsy tenona, spunbon ...
PP Meltblown Production Nonwoven lamba fanaovana Machi ...
1600mm Milina-tsofina lamba fanaovana milina PP Nonwoven ...
Non-tenona famokarana lamba China polypropylene ...
Mandeha ho azy bfe 99 pp meltblown nonwoven lamba Produc ...
Milina tsy vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba tsy misy tenona, feno ...
SMS SS S PP Spunbond milina fanaovana tenona tsy vita tenona ...
Akanjo fandidiana SMS mendrika indrindra SMS milina lamba tsy tenona milina faran'izay avo lenta PP Spunbond lamba tsy vita amin'ny famokarana lamba Lin
Andalana famokarana lamba vita amin'ny lamba tsy tenona vita amin'ny SMS PP, fitaovana famokarana lamba tsy tenona
Anisan'ireo fitaovana indostrialy, ny lamba tsy tenona dia manana ny mampiavaka ny fahombiazan'ny filtration avo, insulation, insulation heat, asidra fanoherana, fanoherana alkali ary fanoherana ny ranomaso. Ampiasaina matetika izy ireo mba hanaovana haino aman-jery sivana, insulateur amin'ny feo, insulation elektrika, fonosana, tafo sy fitaovana manimba sns.
Spunbond tsy misy tenona lamba: hery avo, fanoherana ny hafanana avo lenta (azo ampiasaina mandritra ny fotoana lava ao anatin'ny tontolo 150 ℃), fanoherana ny fahanterana, fanoherana UV, fanitarana avo lenta, fitoniana tsara ary fitrandrahana rivotra, fanoherana ny harafesina, fanamafisam-peo, mothproof, Tsy misy poizina.
Tsipika famokarana tsy vita tenona Spunmelt, tsipika famokarana tsy vita amin'ny tenona
1. Ny fikorianan'ny fitaovana tsy vita tenona iray manontolo dia azo alain-tahaka tanteraka, ary olona 1 ~ 2 ihany no ilaina hiasa, izay afaka mamonjy asa voafetra…
PP Meltblown Production Nonwoven lamba fanaovana milina famokarana
Amin'izao fotoana izao, ny fampiasana lamba tsy misy tenona mifamatotra mifatotra dia mbola mahazatra ihany. Ho fanampin'ireo akanjo fanaontsika matetika, dia takiana amin'ny saron-tava malaza ihany koa ireo lamba tsy voatenona namboarina. Ny tsena goavambe ho an'ny lamba tsy tenona spunbond dia manome ny tsipika famokarana lamba tsy tenona spunbond amin'izao fotoana izao. Aorian'ny fampiasana ny tsipika famokarana lamba tsy tenona spunbond toy ny fitaovana famokarana mandeha ho azy haingam-pandeha dia afaka mamokatra be dia be ny olona. Lamba maro tsy voatenona namboarina mba hamaly ny filan'ny tsena.
1600mm Milina-mitsoka lamba manao milina PP Nonwoven Production Production-dalana,
Ny lamba tsy tenona Spunbond dia tena ilaina amin'ny lamba tsy tenona spunbond. Ny lamba Spunbond tsy tenona dia natsangana taorian'ny nanesorana ny polymer ary nivelatra mba hananganana filamenta tsy mitohy. Napetraka ao anaty harato ny filamenta, ary tapaka ny harato fibre.
Kitapo famokarana lamba tsy tenona China milina polypropylene spunbond fitaovana famokarana lamba tsy tenona
Ny rafitra famokarana dia antsoina koa hoe ny rafitra "S" na ny rafitra "SB" raha fintinina. Ny tsipika famokarana izay mamokatra lamba tsy tenona amin'ny alàlan'ny fizotran'ny spunbond dia antsoina hoe tsipika famokarana tsy vita amin'ny spunbonded. Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny tsipika famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra, ny tsipika famokarana dia azo ampiarahina amin'ny rafitra spinning spunbond maro, izay azo atambatra ho tsipika famokarana SS na SSS spunbond nonwoven.
SMS PP Spunbond Meltblown Composite Nonwoven Fabric Production Production Machines Tsipika ho an'ny tavy lena
Sehatra fampiharana: Ity tsipika famokarana ity dia manana ny toetran'ny kalitao azo antoka sy azo itokisana, haingam-pandeha, vokatra avo ary fanjifana angovo ambany. Ny vokatra novokarin'ity tsipika famokarana ity dia be mpampiasa amin'ny sehatra samihafa, toy ny fitsaboana, ny fitaizana be antitra, ny fidiovana, ny fambolena, ny fanadiovana, ny fidiovana, ny asa eto an-tany, sns. Fepetahana lehibe Masinina: 1.6 metatra 2.4 metatra 3.2 metatra 3.2 metatra. Rafitra: S SS SSS SMS SMMS SSMMS (miankina amin'ny vokatra)
Mandeha ho azy bfe 99 pp meltblown nonwoven lamba Production Line tsy tenona milina fanaovana lamba
Ny lamba tsy voatenona tsy mitenitena dia mitana andraikitra mitokana sy misivana ao amin'ny saron-tava, miaro ny vatan'olombelona amin'ny fidiran'ny vovoka, bakteria ary virus, mampihena ny areti-mifindra isan-karazany ary miaro ny fahasalaman'ny olombelona amin'ny fomba mahomby.
Milina fanamboarana lamba tsy misy tenona avo lenta, tsipika famokarana PP Spunbond Nonwoven vita amin'ny milina feno
Ity polypropylene (PP) spunbonded nonwoven lamba ity dia manana tombony amin'ny fahombiazana ambony, loko tsara tarehy, ary kalitao tsara. Izy io dia afaka mamorona tranonkala fibre symmetrika ary feno amin'ny karazany. Izy io koa dia afaka manampy fitaovana fanodinana sy famenoana mba hampihenana ny vidin'ny vokatra.
Ny SS spunbond nonwoven Production line dia mampiasa teknolojia mandroso sy traikefa mandroso, Mora miasa, mandeha ho azy tanteraka, fanaraha-maso ny efijery PLC, vokatra tsara, haingam-pandeha, avo avo. Ny fitaovana dia matetika 1,6 m ny sakany, 2,4 m ny sakany na 3,2 m ny sakany, ary azo namboarina ihany koa arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana.